Waraysiga madaxweyne ku xigeenka ururka World Somali congress
Nabadda iyo Midnimada Soomaaliya: Waa Dariiqa Mustaqbalka Afrika
Tarjumadii Bashir Salah
Waraysiga madaxweyne ku xigeenka ururka World Somali congress, Cabdullahi Axmad, uu la yeeshay Dr. Muhammad Shamsaddin Megalommatis oo ingiriis ah wuxu ku soo baaxay boogogan www.americanchronicle.com, www.buzzle.com, www.afroarticles.com
Si aan u waadixino wacyiga dhabta ah iyo dhibaatooyinka qarada weyn ee aan muuqan ee ka taagan Geeska Afrika. Waxaan garanay in aan fursad siino Soomaalida dhabta ah ee rayigoodu wax soo kordhin karo, kuwaas oo ka bixin fikrad dhaxalgal ah dhibaatada wadankooda. Saxaafadda adduunweynuhu si weyn ayey ugu dheceen in ay qadiyadan ay dadweynaha adduunka u ban-dhigaan, iyago had iyo jeer ku mashquula dhacdo aan ahayn xaqiiqo faahfaahsan (dhacdo sibibixasho ah).
Haddaba, dhibaatooyinka ka taagan Geeska Afrika oo wajiyo badan ayaa nasiib daradu waxay tahay in akhristayaasha reer Galbeedku waxba kala socon. Sababtaasi awgeed ayaanu go’aansanay in aanu waraysi la yeelano madaxweyne ku-xigeenka ururka World Somali Congress md. Cabdullahi Axmad. Ujeedooyinka ururkaasi ka akhri halkan iyo waxyaabaha kale ee uu mustaqbalka hiigsanayo. Waraysiga Cabdullaahi oo saddex qaybood ah qaybtii kowaad waa tan:
S 1 – Md Cabdullaahi sharaxaad yar akhristayaasha ka sii naftaada iyo waxbarashadaada?
J 1- Waxaan ku dhashay Jibuuti kuna dhamaystay dugisgaygii, waxaan ka qalinjabiyey dugsiga tababarka macalimiinta ee Jibuuti, ka dibna waxaan noqday macalin dugsi. Waxaan la shaqeeyey axsaabta mucaaradka ee jibuuti ilaa aan u hijrooday Kanada arimo siyaasadeed awgeed.
S 2 – Wax yar faahfaahi waxbarashadaada iyo meheradaada?
J 2 – Waxaan shahaadada hore ee xidhiidhka caalimiga ka qaatay jaamacad ku taal Quebec oo la yidhaa Outaouais, haddana shahaadada labaad (masters degree) ayaan ku dhamayn rabaa anigoo ku takhasusay xidhiidhka caalamiga qaybta horumarka Afrikada Bari, isla mar ahaantaana waxan ku shaqeeya maareeye ahaan.
S 3 – 16 sanadood Soomaaliya way kala qaybsanayd iyadoo marmarna isku kacsanayd, maxay tahay sababtu? Ma gacan gumeysi oo qarsoon ayaa ku jirta? Ilaa xadkee ayaa laga yabaa in dhibaatada Soomaaliya kala qaybintii gumeystayaashu ku leedahay?
J.: Xaaladda maanta waa mid laga dhaxlay cadaaladaradii colonial Partition-ka iyo dagaalkii Ummadda Soomaaliyeed ugu soo jirtey muddo 100 sano iyo in ka badan ah xoriyadda iyo midnimo (Quest of National Unity).
S 4 – Haddaan ku soo dhowaano waqtigan, ku yara noqo 70kii ama 80kii, ma jireen waxyaabo tilmaami kara dhibaatooyinka dhacay? Cidise ma filaysey?
J 4 - Ha!. Watan dhowr arrimood.
a) Ku-gargaarkii Guumeystayaasha reer Yurub ay ku gargaareen (hub iyo taageera siyaasadeed...) gacan-ku-dhigiddii gobolka Herer (1882)
c) Qaybihii Dalka Soomaaliyeed ee Ingriiska, Talyaniga iyo Fransiisku ay u dhiibeen Xabashida iyadoo aanay Soomaali ogeyn, ogolayn (1897-1954).
d) Taladii iyo go'aanadii cilmi-baarista ku salaysna ee ay gaareen Guumeysta yaasha reer Yurub (1950-1960) ee ahayd in laga celiyo Soomaali inay xorowdo, haddii Gobanimo gaartana lkaga celiyo inay ka baxaan colonial Partition-ka, sidaas awgeedna loo qaybiyo qabaa'il... (arag Omar Osmaan Rabeh: Republique de Djibouti ou roue de secours d'...Ethiopie, Silex, Paris, 1985. L'Etat et le Pansomalisme, Editions le Derwish, Paris, 1987, etc.)
d)Ku-salayntii qabiil ee Xukunka Trusteeship-ku markuu dhammaaday (1958). Taladaasoo ay diidanaayeen waddaniyiintii SYL oo uu ka mid ahaa Cabdirazaaq Xaji Xuseen, PMkii hore ee Soomaaliya.
S 5 – Soomaali badan oo “Somaliland” ah ayaa sheegta in dhibaato ka soo gaartay xukunkii M. S. Bare; waxay qabaan in la laayey, xukunka dalkana aan laga qaybgelin, arintaasi ma la qabtaa?
J 5.: Waa arrin qotadheer oon runta laga wada sheegayn sababna u ahaayeen qaladda ka soo jeeda
a)siyaasaddii guumeysiga ee ahayd qaybin qabiil, iska horkeen ummadda Soomaaliyeed.
b)Qaladdadii Xukunkii MSB (Maxamad Siyaad Barre).
c) Ka-faa'iideysigii uu ka faa'iideystey Cadawgii Xabashidu.
Waana wax u baahan badhis iyo waqti si xaqiiqada loo ogaado...
S 6 – Maadaama dad badani xumaan ka sheegtaan M S Bare, adiga ra’yigaagu muxuu yahay madaxweynihii ugu danbeeyey ee Soomaali wadajirta? Maxayse ahayd xumaan mise wanaag tuuridiisu?
J 6 – Wax la dhahaaba, waqtigu wuxuu muujiyey in MSB uu ka fiicnaa Kuwii ridey ee ka dambeeyey; kuwaasoo baday Soomaali dil, silic iyo dulli aanay weligeed horey u arag... Wax xal ahna haba yaraadee keeni waayey balse dalkii oo dhan, indhala'aan iyo aqlila'aan cadowga gacanta u geliyey, ummaddi lagu xasuqay, Dowladnimadii halis u tahay inay ku lunto dadkuna ku dabargo'o...
Somali Galbeed way ka soo Go’i’ doonta Kakabka “Itoobiya”
S 7 – Ma dhamaystirnayn xornimadii Soomaaliyeed (1960) iyadoo Soomaali Galbeed ay haysto Abisiiniya, muhiimad intee le’eg ayey dowladii Soomaaliyeed siiyay xoreynta Soomaali Galbeed (1960 – 1977)?
J 7 - Arrintaasi waa ta keentay in nabad xaq ihi ay ka dhici weydo Geeska Afrika. Halkagankii xorriyaddoonka iyo midnimada Qaranka Soomaaliyeedna waa sababta keentay in Dowladdii Soomaaliyeed ugu dambeyn ku burburto markii iyo ku guuleysetay (1977) ay reer Bari Sofetiga iyo reer Galbeed isugu tegeen ee annagoo Xabashi jebinay Guushii si "artificial" iyo dulun ah la nooga gundhiyey...
S 8 – Awood aan la qiyaasi Karin ayey Soomaalidu 1977 isugu geysay xorayntii Soomaali Galbeed, inkastoo ciidamadii Soomaaliyeed ku dhowaadeen Finfinne magaalo madaxdii hore ee Oromada ee Amxaarku ugu wanqalay Adis Ababe, haddana Soomaalidu dagaalkii kuma guulaysan ka dib markii Soofetigu u hiiliyey Abisiiniya, Maraykankuna caawimaad diiday Soomaalida, dhibaato intee le’eg ayay arintaasi Soomaalida ku abuurtay?
J 8 – Waan ka adkaanay Abisiiniaya laakiin, guushii aan dhibka badan u soo marnay ayaa cadow naga xoog weyne si gardaro ah nooga qaaday, ka dib Xabashi la siiyey. Waa runtaa waan ku dhowaanay Finfinne weligayana waan jebin jiray, runta iyo xaquna wuu soo bixi, iyagana dib ayaanu ugu celin doonaa buurihii ah ka yimaadeen. Arinta dhib badan ayey Soomaalida ku reebtay waase laga bixi insha Allaah.
Qaybtii labaad: waraysiga madaxweyne ku xigeenka ururka World Somali congress:
Sina u ogolaanmayno burburka qorshaysan ee Soomaaliya. ..
Magaalkii hore ee Nabadda iyo Midnimada Somaaliya (kor ka akhri)…
Waxaan hore idiinku sheegnay u jeedooyinka iyo ahdaafta ururka, haddana waatan qaybtii labaad ee waragsiga uu qaaday Dr. Moxamad Shamsuddin Megalamatis.
S 9 – May 1991 “Somaliland” waxay ku dhawaaqday xornimo; madaxda sare ee “Somaliland” muxuu yahay xidhiidhka ay la lahaayeen Amxaarkii Dhagarqabiihi Shuuciga ahaa ee Misgistu? Haddase muxuu yahay cilaaqaadka madaxdaasi la leeyihiin dowladda beenta ah ee keligi taliye Melis?
J 9 – Siyaasad xumadii laga dhaxlay Guumeysiga iyo qaladdadii faraha badnaa ee Soomaali dhexdeeda ahayd (Dowladnimo horteed iyo dabadeed) cadhadii, fahamdarradii taariikheed ee geeska ayaa qabaa'ilka Soomaaliyeed u geeyey, gacantana u geliyey cadowga Xabashida oo markaas dib ugu isticmaalay Dalkoodii-Hooyo iyo burburinta Dowladdii Soomaaliyeed. Taasoo ilaa maanta qabaa'ilkii "hostage" u yihiin... Ujeeddada Xabashida, oo Qarbigu ku taageerayaana ay tahay in Xabashidu qabsato Soomaaliya iyo duulimaadka iyo occupation-ka loo sheegayo sabababo la og yahay inay been yihiin (US-Ethiopia alliance). Laakiin ugu dambeyn Itoobiya waa tii arrinkaas iyadu ku burburta...
S 10 – Intee in le’eg ayuu keligii-taliska “Somaliland” ka metali karaa rabitaanka go’i’da ama rabitaanka Soomaalida inteeda badan ee ku hoos nool?
J 10 - Waa afduub ee Dadweynaha Soomaaliyeed ee Woqooyi ma ogola kala-go'a Soomaaliyeed. Maalinba maalinta ka dambeysana way arka yaan in loogu yaboohay indhasarcaad aanay waxba ka jirin oo lagu sirayo, danaystayaal iyo dhuuniqaatayaalna ay ku gabraaranayaan iyagoon dan ka lahay dad, sharaf iyo mustaqbal midna... Madax-ku-sheegu waxay maqaarsaar u yihiin Melis.
S 11 – Ma jiran “Somaliland” dhexdeeda dad lagu cadaadiyo jinsiyaddooda, lahjaddooda, diintooda ama qoladooda?
J 11 – Maya, Soomaalidu waa 100% muslimiin, Shafici waxayna ku hadlaan hal luqo oo lahjado badan leh.
S 12 – Fikrad noocee ah ayaad ka qabtaa axsaabta, xisbiga kulmiye iyo xisbiga nabada iyo midnimada ee Waqooyiga Soomaaliy?
J 12 - Way fiican yihiin. Xalkana gacanbay ka gaysan karaan. Hase yeeshe Meles iyo Rayaale ma ogola waxanay rabaan inay burburiyaan iyagoo ka cabsiqaba doorashooyinka soo socda in Dadweynaha Somaliland ay aqlibiyad weyni iyaga raacaan. Waxa Rayaale iyo Xabashidu ku tashadeen, go'aanna ku gaareen in lagaga takhaluso. Sidaas awgeed waxa loo baahan yahay inay digtoonaadaan, Dadweynaha wargeliyaan oo ay kiciyaan, waxaanay istaahilaan taageero Somaliland gudaheeda, Dadweynaha Soomaaliyeed iyo International Community intaba.
S 13 – Maxay tahay ubucda dhibaatada Soomaaliyeed?
J 13 – Hadda waxay diiraddu saaran tahay qabsashada xulafada ciidamada Maraykan iyo Abisiiniya ee wadanka Soomaaliya.(US-Ethiopian occupation): Dhibaatadu way tahay kala qaybinta ummadda, abuurida dagaal sokeeyee, gaajo ku dilidda dad badan oon waxba galabsan, xasuuqa macna la’aanta ah, kufsiga joogtada ah, danbi nooc walba leh oo aan xad lahayn arimahaasi ayaa hadda ugu weyn.
S 14 – Dadweynaha adduunka oo dhan waxaa laga dhaadhiciyey in Soomaalidu tahay wadan aan jirin (Failed state), adiga Soomaali ahaan arintaasi sax ma kula tahay? Soomaaliduse ma iyaga keliyaa u sabab ah in Soomaaliya 16 sano degi weydo mise shisheeyana waa ku lug leeyahay?
J 14 - Maha oo qudha propagandahaasi inuu been yahay. Balse:
b) Waxa loo duurgalay sidii qaabkii dowladnimo ee Soomaaliyeed loo dumin laha.
t) sidii looga celin lahaa in Soomaali ay soo ceshato oo ay la soo noqoto dibna ugu dhisato habkii dowladnimo ee lagu sugi laha "law and order" isafgarasha , midnimo iyo dib-u-heshiinna ay ka dhalan lahaayeen.
j) Qalaalse ula kac ah oo gumeysi dambeeyo si Soomaali looga ilaasho in ay nolol caadi ah ku noolaato, loona kala ilaaliyo si aan Soomaali isu fahmin, in laga mashquuliyo in ay ka tashato aayeeda sii ay u hirgeliyaan dib-u-heshiinsiin dhab ah.
x) Waxa la aloosay propagando lagu fidinayo waxaan jirin ("argagixiso" "Al-qaai'da", nabadgelyo darro Geeska Afrika oo Soomaali ugu wacan tahay iwm) oo lagu xalaalaysanayo soo faragelin, qas iyo qabsashada Dalka Soomaaliyeed.
kh) In shirar-beenaad "dib-u-heshisiin" ah la iska dhigo in Soomaali loo qabanayo isla markaana laga shaqeeyo (Qarbi, US, Ethiopia iyo Keniya) sidii loo fashilin, u dhicisoobi lahaayeen, markaasna dusha loo saaro Soomaalida!...
d) Qorshayaal la soo dhisay oo been ah looguna talo galay fashil, dicaayado been, oo la rabo in lagu abuuro rajo-beel iyo in aan dib laysugu imaan Karin.
r) Tarjumo been ah oo laga sameeyo xaqiiqada iyadoo la buun-buuniyo in Soomaali heshiin weyday, iyadoo aan markii hore loogu talo gelin in ay heshiiso, ka dib godobta iyada dusha loo saaro.
s) In shirkii qudhaha ee dhabta ahaa ee xaqa ahaa ee Soomaali ay ku heshiisey iyadoon la soo faragelin, dowladna ku dhisatey, la aqoonsan waayey, oo laga horyimid (EU, US, UN, Ethiopia, Keniya...) sidaasna waxba uga suurtageli waayeen ( Shirkii Jabuuti ee 2000)
S 15 – Dad badan oo adduunka ah waxay aamisan yihiin in Soomaaliya noqotay wadan muslimiin xagjir ah, sidee ku qiimayn lahayd arintaani?
J 15 – Saxaafadaha reer Galbeed ayaa waxaasi faafiya si ay ugu qariyaan qorshayaashooda. Soomaalidu 100% waa muslim, waxay jecel yihiin in ay u noolaadaan sidii awoowayaashood u noolaayeen. Weligood laguma aqoon xagjirnimo, dad cawaan ah ayaa dhinac walba ka xigay, haddii aan taasi been ahayna maanta gobolka kuma noolaadeen dad aan muslimiin ahayn.
S 16 – Xaqiiqa ahaan, way jiraan xoogaa Soomaali ah oo islaamino u taagan, laakin maanta way yar yihiin oo way kala firdhadeen gacan weyna kuma laha xoreynta Soamaaliya. Marka xagee jiraan? Ma ku yar yihiin xagjiradu Koofurta Soomaaliya? Mise waxaa laga helaa “Puntland” iyo “Soomaaliland”?
J 17 - Soomaalidu waa dad muslimiin ah.
Dulunkana way u adkeysan waayeen. Qarbigu waddaniyiinta Soomaaliyeed oo dhan, waranle iyo wadaad, wuxu ku sheegay "extemists" ama "argagixiso" si loo abuurto sabab lagu weeraro, Ummadda Soomaaliyeedna lagu duudsiiyo. Nasiibdarradu waxa weeye in taas la marsiiyey ra'yilcaamkii adduunka (powerful western media) oo beentaas maalin walba u fidiya si joogta, run ka dhiga "version"-ka Xabashida, isla markaasna marooriya amase dabool culus saaray aragtida Ummadda Soomaaliyeed iyo inta u hadasha. Waxase nasiibdarra ah in Soomaalidu arrintaas been-abuurka ah aanay siinin, weligeed, qimaha ay leedahay iyo dhibaatada culus ee ay noo geysatey. Hase yeeshe Ummadda Soomaaliyeed waxay aaminsan tahay in mu'aamaraduhu fashili doonaan, runtu soo bixi doonto, lana arki doono, run ahaan, Ummadda Soomaaliyeed ee dambi iyo ceeb oo dhan dusha loo saaray, ay gibilka iska rogi doonto, waxay tahay la ogaan doono.
S 17 – Ma jiraan Soomaali siyaasadood u janjeedho xaga reer Galbeedka?
J 17 Haa waa jireen, laakiin waa sii yaraanayaan. Cadaawadda Qarbiga awgeed...
S 18 – Awood intee le’eg ayey leeyihiin waxgaradka Soomaaliyeed? Tiradooda iyo qaybta ay ku leeyihiin go’aanada siyaasadeed? Ma sheegi kartaa xarumaha ay ku badan yihiin?
J 18 - Waxaa loo baahanyahay in la darso si aan jawaab qeexan uga bixiyo. Waxgaradka Soomaaliyeed wuxuu ku badan yahay magaalooyinkan: London, Igiriiska, Menneapolis, Maraykanka, iyo Toronto, Kanada.
S 19 – Ilaa xad intee le’eg ayaad ku qanacsan tahay siyaasadda arimaha dibada Maraykanka ee ku wajahan Soomaaliya?
J 19 - Sida ay imminka tahay, siyaasadda Maraykanku qiima iyo qadarin midna ma leh. Siyaasada maaha, waa "bricolage" indhala'...Si aan macquul ahayn ayuu ugu dhacay, sidee ugu faraxsanaan kartaa markaad aragtid wadan weyn oo sida Maraykanka oo siyasadisa dibadu ay la mid tahay dhaqanka dibad-joogta u dhaqmaya. “wildcats”
S 20 – Ilaa xad intee le’eg ayaad ku qanacsan tahay wadamadaan yurubta Ingiriiska iyo Talyaaniga ah siyaasadood ku aadan Soomaaliya?
J 20 – Yurubtu guud ahaan waxaad moodaa in siyaasadoodu ka qaangaarsan tahay tan Maraykanka, Laakiin wadamadaad magacowday waa sug oo arag ama maahmaahdii Faransiiska ee ahay aamusku waa ogolaansho, inkastoo ay xadiisna tahay.
S 21 – Ilaa intee ayaad ku raali tahay siyaasadda wadamada Afrikaanka ah iyo danahoda ee ku aadan Soomaaliya sida Koonfur Afrika, Sudan, Masar, Marooko, Nayjiiriya, iyo gaar ahaan Eriteriya?
J 21 - Ilaa imminka, AU waxa maamulanayaey Abisiiniya, waxaanay isgarabtaagtay IGAD oo ah qalab iyo gaashaan ay ku gabraarato Abisiiniya, siyasaddeedii soo jireenka ahaydna ay ku fushato (qabsashada Soomaaliya, oo hiil iyo hooba ay uga heshay Dowlada Qarbiga). Hase yeeshee Dowladaha Afrika waxay bilaabeen inay arkaan ujeeddada dahsoon ee Abisiiniya ay Soomaaliya ka leedahay iyo inay u adeegayso dana ajnabi oo Afrika ku liddi ah. Sidaas awgeedna waxay bilaabeen inay ka fogaadaan muuqifyadeeda iyo siyasaddeeda... Xaqiiqa ahaan waxaan aad ugu mahadcelinaynaa dowladda Eriteriya oo na dhinac istaagtay waqti arintu aaney sahlanayn, waana xusuusan doonaa.
S 22 – Ilaa xadkee ayaad ku qanacsan tahay wadamada afcarabiga ku hadla siyaasadooda ku wajahan Soomaaliya?
J.: Aadbay Soomaali uga xumaatay taageera la'aanta Carbeed...Waxaan rabaa in aan xusuusiyo siyaasad-yahanada Carbeed in aan Soomaaliya ayna ka aamusu lahayn hadii qaddiyad carbeed khatar ku jirto.
La soco qaybta saddexaad ee waraysiga Cabdullaahi
Haddaad rabtid waraysga oo Ingiriis ah riix http://www.somalicongress.org/article1306.html